ရိုက်ကူးရေး လုပ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေ ကို ကန်တော့ ရတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Let Pan Daily
ကျောင်းကပွဲ တစ်ခုကနေတဆင့် ဖေ့ဘုတ်စ် ဆယ်လီ တစ်ယောက်အဖြစ်နာမည်ကျော်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးကတော့ ကြော်ငြာတွေ ဇာတ်လမ်းတိုတွေရိုက်ကူးရင် ပရိသတ်အားပေးမှု အတော်လေးရလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ မကြာခဏ ဆိုသလို သူမရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ် လျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေ လေးစားချစ်ခင်နေကြရတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်လို့တောင်ပြောရမှာပါ ။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာရှင် ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေကို သူမရိုက်ကူးရေးမှာ ပါဝင်စေပြီး အနုပညာကြေးအဖြစ် ရိုက်ကူးရေးပြီးတိုင်း ကန်တော့ တတ်တဲ့ သူမရဲ့အကျင့်လေးကတော့ တကယ်ကိုချစ်စရာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ လတ်တလောမှာတော့ ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ လူလဲပင်ပန်း စိတ်လဲပင်ပန်းပေမယ့် ပီတိလေးတွေက ရင်ထဲကို အေးချမ်းစေတယ် ဆိုတဲ့စာသားလေး နဲ့အတူ ရိုက်ကူးရေးအပြီး အနုပညာရှင်တွေကို ကန်တော့နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။.
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အမာခံ ပရိသတ်ကြီး ကတော့ အခုလိုရိုးသားဖြူစင်ပြီး လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် လှူဒါန်းရတဲ့အကျိုးကြောင့် ဖြူဖြူ့ရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် အနုပညာခရီးလမ်းမှာအမြဲသာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့ ကြည်နူးဖွယ်ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေပေးထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။jဖူဖြူထွေးကို အားပေးကြတဲ့္ဘပရိသတ်ကြီး အတွက်လည်း သူမရဲ့ အလှူပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ရိုကျကူးရေး လုပျပွီး အနုပညာရှငျတှေ ကို ကနျတော့ ရတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ့မှမလဲနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ ဖွူဖွူထှေး
ကြောငျးကပှဲ တဈခုကနတေဆငျ့ ဖဘေု့တျဈ ဆယျလီ တဈယောကျအဖွဈနာမညျကြျောလာတဲ့ သရုပျဆောငျ ဖွူဖွူထှေးကတော့ ကွျောငွာတှေ ဇာတျလမျးတိုတှရေိုကျကူးရငျ ပရိသတျအားပေးမှု အတျောလေးရလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ။ မကွာခဏ ဆိုသလို သူမရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးလေးနဲ့ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျ လကျြရှိပွီး ပရိသတျတှေ လေးစားခဈြခငျနကွေရတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျလို့တောငျပွောရမှာပါ ။
ကိုဗဈကာလအတှငျး အလုပျလကျမဲ့ ဖွဈနတေဲ့ အနုပညာရှငျ ဇာတျပို့ ဇာတျရံတှကေို သူမရိုကျကူးရေးမှာ ပါဝငျစပွေီး အနုပညာကွေးအဖွဈ ရိုကျကူးရေးပွီးတိုငျး ကနျတော့ တတျတဲ့ သူမရဲ့အကငျြ့လေးကတော့ တကယျကိုခဈြစရာပါ ပရိသတျကွီးရေ ..။ လတျတလောမှာတော့ ရိုကျကူးရေးတှနေဲ့ လူလဲပငျပနျး စိတျလဲပငျပနျးပမေယျ့ ပီတိလေးတှကေ ရငျထဲကို အေးခမျြးစတေယျ ဆိုတဲ့စာသားလေး နဲ့အတူ ရိုကျကူးရေးအပွီး အနုပညာရှငျတှကေို ကနျတော့နတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ ။.
ဖွူဖွူထှေးရဲ့ အမာခံ ပရိသတျကွီး ကတော့ အခုလိုရိုးသားဖွူစငျပွီး လိုအပျနတေဲ့သူတှေ အတှကျ လှူဒါနျးရတဲ့အကြိုးကွောငျ့ ဖွူဖွူ့ရဲ့ ရှဆေ့ကျလြှောကျရမယျ့ အနုပညာခရီးလမျးမှာအမွဲသာယာဖွောငျ့ဖွူးပါစလေို့ ကွညျနူးဖှယျဆုမှနျကောငျးလေးတှပေေးထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။jဖူဖွူထှေးကို အားပေးကွတဲ့်ဘပရိသတျကွီး အတှကျလညျး သူမရဲ့ အလှူပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေ တဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေ နဲ့ အချစ်ပိုစေတဲ့ ဘေဘီမောင်